Nekukurumidza kukurumidza kwemaindasitiri emazuva ano uye nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, zvido zvevanhu mumabhokisi ekupakata zvicharamba zvichiwedzera. Nekudaro, vatengi ikozvino vanoisa kumberi kwakakwirira zvinodiwa kune mhando yemabhokisi ekupakisha. Saka zvinoda kushandisa technolo nyowani ...
Ndeapi mabasa emabhokisi ekupakisha?
Bhoksi rave chishandiso chakasimba chekushambadzira. Akanyatsogadzirwa mapakeji mabhokisi anogona kugadzira nyore kukosha kwevatengi uye yekusimudzira kukosha kwevagadziri. Zvinhu zvakasiyana siyana zvinosimudzira kuenderera mberi kwekutakura sechishandiso chekushambadzira mukushandisa. Sezvo zvigadzirwa zvinowedzera uye zvakawanda zvinotengeswa ...
Maitiro mangani aripo mukugadzira chipo bhokisi?
Sezvo mabhokisi ezvipo ave kunyanya kufarirwa mumakore achangopfuura, vanhu vazhinji uye vazhinji vava kufarira kugadzira avo ezvipo mabhokisi ezvipo. Mazhinji emabhokisi epamusoro-ekupedzisira muhupenyu hwezuva nezuva akagadzirwa nemapepa, uye pepa pepamusoro rakanyanya kukodzera kumwe kugadzirisa. Kunyangwe iwo mabhokisi echipo achitaridzika kunge akapusa, iwo ...